ပိုးသတ်ဆေးစက် | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan ,OEM,ODM-cropprotectionmachinery.com
ကျနော်တို့ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ Taiwan ပိုးသတ်ဆေးစက် ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူ။ တည်ငြိမ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် မူတည်. ထက်သာလွန်အရည်အချင်းကိုနှင့်ကောင်းမွန်သောပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့သူများတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်သင်တို့အဘို့အ-on အချိန် delivery မှာကတိပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူနှစ်ရှည်စီးပွားရေးထူထောင်ခဲ့ကြပါပြီ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစံပြအတွက်စိတ်ဝင်စားပါက, အခမဲ့ဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
အဆိုပါ antifungal ဒြပ်ပေါင်း 1 ၏ရှေ့မှောက်တွင်-methyl-4-nitroso-5-phenyl-ဌ H ကို-မီးခိုး၌ရှိသော irnidazole-ရေထုတ်ယူ(Chumpookam et al.,2012)ထို့အပြင် Pythium SP ၏တားစီးဖို့အထောက်အကူဖြစ်နိုင်သည်.တိုးတက်မှုနှုန်း.lmidazoles မှိုဆန့်ကျင်တက်ကြွဖြစ်ကြပြီးလည်း bacte ၏ကျယ်ပြန့ဆန့်ကျင်ထိရောက်သောဖြစ်ကြောင်းမူးယစ်ဆေးဝါးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိပါတယ်&အလှနျရှကျကွောကျတတျသော;RIA.တချို့က imidazole မူးယစ်ဆေးဝါးများမြင့်မား con မှာအသုံးပြုသောအခါ, အမြှေးပါးကိုပျက်စီးစေနိုင်စွမ်းရှိ&အလှနျရှကျကွောကျတတျသော;လွတ်လပ်စွာယဉ်ကျေးမှုအလတ်စားနှင့်ကြီးထွားမှုနှုန်း၏တိုတောင်းတဲ့အချိန်များအတွက် centration.
သည်အခြားသုတေသီများကြောင့်မီးခိုးသရုပ်ပြပါပြီ-ရေအစေ့မျိုးစေ့ကာကှယျပေးနိုငျ&အလှနျရှကျကွောကျတတျသော;မှာပိုးမွှားဆန့်ကျင်အနောက်တိုင်းသြစတြေးလျ၏အနောက်တောင်ဘက်အများအပြားစက်ရုံမျိုးစိတ် Ling&အလှနျရှကျကွောကျတတျသော;တဲစပ်,ပိုမိုမြင့်မားသောပျိုးပင်ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးနှင့်စိုက်ပျိုးများအတွက်ကျန်းမာပျိုးပင်အတွက်ရရှိလာတဲ့(Roche et al，1997).
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.cropprotectionmachinery.com/my/pesticide-machine.html
ပိုးသတ်ဆေးစက် ထုတ်လုပ်သူနှင့် ပိုးသတ်ဆေးစက် ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းစ ,OEM,ODM-ကျော် 70,295 ကမ္ဘာတဝှမ်းဝယ်လက်မှာ cropprotectionmachinery.com